I-IPL SHR Elight RF Factory - China IPL SHR Elight RF Abakhiqizi, abahlinzeki
I-SHR imele iSuper Hair Removal, ubuchwepheshe bokususwa kwezinwele unomphela okunempumelelo enkulu. Uhlelo luhlanganisa ubuchwepheshe be-laser kanye nezinzuzo zendlela ekhanyayo yokukhanya ethola imiphumela engenabuhlungu. Ngisho nezinwele kuze kube manje obekunzima noma okungenakwenzeka ukuthi zisuswe.
I-SHR imele iSuper Hair Removal, ubuchwepheshe bokususwa kwezinwele unomphela okunempumelelo enkulu. Uhlelo luhlanganisa ubuchwepheshe be-laser kanye nezinzuzo zendlela ekhanyayo yokukhanya ethola imiphumela engenabuhlungu. Ngisho nezinwele zinzima noma akunakwenzeka ukuthi zisuswe, i-SHR iyelapheka. I- "In Motion" imele intuthuko ekususweni izinwele unomphela ngobuchwepheshe bokukhanya. Ukwelashwa kumnandi kakhulu kunezinhlelo ezijwayelekile futhi isikhumba sakho sivikeleke kangcono.
2021 OPT Laser SHR SR HR IPL Laser Izinwele Machine Ukususwa
Ukwelashwa kumnandi kakhulu kunezinhlelo ezijwayelekile futhi isikhumba sakho sivikeleke kangcono.
I-2021 ephathekayo ephatha kabili SHR IPL Izinwele Susa Umshini nge-Factory Price
I-IPL SHR yokuthengisa okusha okushisayo okususwa kwezinwele okuphathekayo kuyaphatheka